मौद्रिक नीति कार्यान्वयन होला ?
२०७७ सावन, ९
नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको भनी प्रशंसा गरिएको पाइन्छ । हो, निजीक्षेत्रलाई राहत मिल्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति कतिपय लागू नहुने सम्भावना छ भने कतिपय खासै विशेष छैनन् । अर्को, कार्यान्वयनका चरणमा गएपछि त्यो प्रभावकारी नहुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । कतिपय नीति भने सबैको प्रशंसा पाए पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार नभएको पनि देखिन्छ ।
खासगरी बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा लगाएको लगाम, ऋणपत्रबाट अनिवार्य रूपमा पैसा उठाउने प्रस्ताव आदिले बैंकलाई सबल बनाउँदैन । बोनस शेयरको भारीले बैंकको अवस्था पूँजी भार बढी हुन सक्छ । मार्जिन लेन्डिङमा दिइएको थोरै सहुलियतले शेयरबजारमा कारोबारीहरूको बाहुल्य बढाउनेछ र बजारलाई अस्थिर बनाउनेछ । त्यो लक्षण यो हप्ताको कारोबारले संकेत गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य परिपत्रबाट गर्न सक्ने कामलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समेटेको र नीतिमा कुनै नयाँपन नदेखिएको पनि कतिपयको प्रतिक्रिया पाइन्छ । कोरोनाका कारण अधिकांश अर्थतन्त्रको वृद्धि २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने आकलन भइरहेको अवस्थामा नेपालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सक्छ ?
ऋणीलाई कर्जा चुक्ताका लागि समय थपिदिनु सहुलियत भए पनि कर्जा तिर्नकै लागि कर्जा दिने नीतिले लाभ पुग्नेमा आशावादी हुन सकिने अवस्था छैन । तरलता, ब्याजदर र मूल्यवृद्धि व्यवस्थापनका विषय परम्परागत तरीकाले नै आएका छन् । कोरोनाका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत पुग्ने खालको नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र सचेत सशंकित छ । ऋणलाई पूँजीकरण गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि यसअघिकै घोषणा अहिलेसम्म उपयोग नभएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमै शंका हुनु अन्यथा होइन । नेपालमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवै सार्वजनिक हुँदा पक्ष विपक्षमा मत आउँछन् । तर, तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा कमै ध्यान गएको पाइन्छ । प्रशंसा गर्नेले पनि पछि यसको विरोध गरेको पाइन्छ । यो मौद्रिक नीति पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
सरकारसँग अपेक्षा गर्न छाड्नुपर्ने भएकै हो त ?[२०७७ सावन, १६]
शेयरबजारमा चलखेल भएको हो ?[२०७७ सावन, ९]
भनाइ र गराइमा फरक[२०७७ सावन, ९]
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन होला ?[२०७७ सावन, ९]
सलहको अर्को हूल ![२०७७ असार, १९]